I-Attic 2 iibhedi zeCarezza.
Isitudiyo esineattic esineempawu ezirentwayo ezingaphakathi kwesakhiwo saseHabsburg Grand Hotel Carezza, sintywiliselwe kwisakhelo seCatinaccio kunye neLatemar Dolomites, ikhilomitha e-1 ukusuka eLake Carezza kunye nezinyuko ezimbalwa ukusuka kwizinyusi zokutyibilika ekhephini.
Indawo yokuhlala yothando, ixhotyiswe ngekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elineshawa, ilungele isibini; iyakwazi ukuhlalisa umntwana, njengoko kukho ibhedi encinci yokukhupha kwi-dresser. Okwangoku akukho nkonzo yamaphepha kunye neetawuli ezikhoyo.
Yindawo enomtsalane, enoxolo apho unokuphumla kwaye unxibelelane nendalo. Ebusika
iilifti zikhululekile kakhulu, zifanelekile kubantwana kunye nabaqalayo. Kunokwenzeka ukuqesha izixhobo zokutyibiliza. Ehlotyeni yiparadesi kwabo bafuna ukuthatha uhambo lokuphumla emadlelweni nasemahlathini, okanye ukwenza uhambo olucelomngeni ngakumbi nangee-ferratas. Iibhayisekile zinokuqeshwa kufutshane nehotele. Zama iindawo zokutyela ezikufutshane, ezifikelelekayo ngeenyawo okanye ngemoto.
Ndishiya uNksk. Graziella, ohlala kwisakhiwo, njengomntu onxibelelana naye.